Vaovao - Cosmoprof Manerantany Bologna
Nahemotra amin'ny septambra ny fanendrena ny Cosmoprof Worldwide Bologna andiany faha-53.
Nahemotra indray ny hetsika ny 9 ka hatramin'ny 13 septambra 2021 , manoloana ny vonjy taitra momba ny fahasalamana mitohy mifandraika amin'ny fiparitahan'ny covid19.
Nanaintaina ilay fanapahan-kevitra nefa nilaina izany. Avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mijery ny andiany manaraka izahay miaraka amina fanantenana lehibe, ary noho izany dia ilaina ny miantoka fa ny hetsika dia milamina sy azo antoka tanteraka.
Cosmoprof Worldwide Bologna, natsangana tamin'ny 1967, dia fampirantiana malaza amin'ny marika hatsaran-tarehy eto amin'izao tontolo izao. Manana tantara lava be izy ary manana laza malaza. Atao matetika ao amin'ny Foibe fampirantiana iraisam-pirenena Cosmoprof any Bologna, Italia isan-taona.
Ny foiben'ny hatsaran-tarehy italiana dia manana laza tsara eran'izao tontolo izao noho ny isan'ny orinasa mpandray anjara sy ny karazan-doko isan-karazany, ary voatanisa ao amin'ny foibe hatsaran-tarehy manerantany lehibe sy manam-pahefana avy amin'ny Guinness World Book. Ny ankamaroan'ireo orinasam-panatsarana malaza manerantany dia nanangana tranoheva lehibe eto handefasana vokatra sy haitao vaovao. Ho fanampin'ny vokatra sy teknolojia marobe, ny fampirantiana koa dia misy fiantraikany mivantana sy mamorona ny fironan'ny fironana eran'izao tontolo izao, manohy ny sehatra matihanina sy malaza tsy tapaka.
Ny Cosmoprof Worldwide Bologna dia foara manara-penitra: efitrano 3 natokana ho an'ny sehatra manokana sy fantsom-pizarana izay misokatra sy manakaiky ny besinimaro amin'ny daty samihafa mba hanamorana ny fitsidihan'ny mpandraharaha sy hampitomboana ny fotoana fihaonana sy raharaham-barotra.
Salon taovolo, Nail & hatsaran-tarehy COSMO dia salon iraisam-pirenena miaraka amina làlana voavoatra ho an'ireo mpaninjara, tompona ary mpandraharaha matihanina amin'ny foibe hatsaran-tarehy, fahasalamana, spa, hôtellerie ary salon fanaovana volo. Tolotra avy amin'ny orinasa tsara indrindra mamatsy vokatra, fitaovana, fanaka ary serivisy ho an'ny tontolon'ny matihanina amin'ny volo, hoho ary hatsaran-tarehy / spa.
Perfumery sy kosmetika COSMO dia ny fampirantiana iraisampirenena miaraka amin'ny làlana voavoatra ho an'ny mpividy, ny mpaninjara ary ny orinasa liana amin'ny vaovao avy amin'ny tontolon'ny fivarotana fivarotana zava-manitra sy makiazy. Tolo-marika marika tsara tarehy indrindra eto an-tany afaka mamaly ny filan'ny fizarana makirana sy miovaova hatrany.
Cosmopack no fampirantiana iraisam-pirenena manan-danja indrindra natokana ho an'ny rojom-pamokarana kosmetika amin'ny singa rehetra ao aminy: akora sy akora ilaina, famokarana antoko fahatelo, fonosana, mpangataka, milina, automatique ary vahaolana feno amin'ny serivisy.
Fotoana fandefasana: Feb-24-2021